Izindaba - Ukubuyekezwa Kwamakhasimende
Ngemuva kwesikhathi eside sentuthuko embonini yamakhandlela, thina ikhandlela likaWinby liqongelele amakhasimende amaningi futhi lathola ukunconywa okuphezulu okuvela emazweni amaningi. Okulandelayo ukuqashelwa kwamakhasimende kwemikhiqizo nezinsizakalo zethu.
▶ lokhu kuyesabeka, futhi ngivivinye amakhandlela ami futhi kusebenza kahle, kepha ngidinga amahora ama-2-3 okwenza ichibi elincibilikile ngokuphelele. kodwa jikelele ngiyawuthanda lo mkhiqizo. ngithemba ukuthi kukhona ongakhetha kukho, njengobubanzi be-wick for jar bunobubanzi obungu-7-8cm.
UWendy ngangixhumana naye ngaleli oda futhi nenkonzo yakhe yamakhasimende yayiyinhle kakhulu! Ngincoma kakhulu ukubhekana nale nkampani.
▶ Ngi-ode izimbiza ezingilazi ezimnyama, zifana ncamashi nesithombe. Ngingathanda ukuthunyelwa ngokushesha kepha zifike cishe impela lapho umthengisi ethe uzothanda futhi ngithole imininingwane eminingi yokuthumela nokulandela umkhondo. Bezipakishwe kahle futhi kuzimbiza ezingama-300 ebezi-ode ukuthi kuzoza eyodwa kuphela ephukile.
▶ Ngijabule kakhulu ngekhwalithi nokubukeka kwalo mkhiqizo. Bengifuna imbiza ezongena esikhundleni sebhizinisi lami lamakhandlela futhi ngathola i-oda lezimbiza ezimnyama nezimhlophe eziyi-14oz ezinesivalo sokhuni. Ngithole i-oda lami ngokushesha okukhulu ngicabanga ukuthi livela eChina. Ngithemba ukufaka i-oda ngobuningi kungekudala lapho ngikwazi ukukhokhela i-MOQ yamayunithi ayi-1,000.
Amakhandlela we-bex wekhwalithi enhle. Kupakishwe ngokucophelela futhi kwalethwa ngesikhathi. Isevisi ibishesha futhi inobungani. Nginga-oda futhi.
▶ Amabhodlela ayefana ncamashi njengoba kuchaziwe futhi inkonzo yayinhle. Ngigculisekile impela.
▶ intambo enhle yokhuni futhi isha kahle. UWendy Fu uchwepheshe kakhulu futhi muhle ukuxhumana naye. uzokweluleka ngalokho okudingayo. amanani nawo athembekile. Ngiyabonga!
Nazi izithombe ezivela kumakhasimende ethu.
Isikhathi Iposi: Feb-07-2021